Wasiir ka tirsan Maamulka Hir-shabeelle oo geeriyooday iyo MD waare oo ka tacsiyadeeyay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wasiir ka tirsan Maamulka Hir-shabeelle oo geeriyooday iyo MD waare oo ka tacsiyadeeyay
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ku geriyooday wasiirkii hubka dhigsta dhaqan-celinya maleeshiyaadka ee maamulkaas.
Axmed Cumar Gaaboow ayaa ahaa wasiir iyo xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaana la xaqiijiyay in uu u geeriyooday xanuun maalmihii lasoo dhaafayay hayay.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa dalsan u xaqiijiyay geerida AUN wasiirkii hubka dhigsta dhaqan-celinya maleeshiyaadka hirshabeelle.
Wasiir ka tirsan Maamulka Hir-shabeelle oo geeriyooday iyo MD waare oo ka tacsiyadeeyay was last modified: May 7th, 2020 by Admin
Masuul katirsan Puntland oo u geeriyooday cudurka Coronavirus & MD Denni oo katacsiyadeeyay
Filim sameeye muuqaal Jees Jees ah ka sameeyay Madaxweyne Sisi oo Xabsiga Ku Geeriyooday.
video Wasiirka Gaashaandhiga Somalia oo ka hadlay Waxyaabahii lagu Heshiiyay